ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကိုပြသော လက္ခဏာ (9) ရပ် | Page 38 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
၅.၃.၂၀၁၇ | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ရာသီသွေးဆင်းများနေလား? နည်းနေလား? (ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိစေဖို့၊ အပိုင်း - 8)
♦ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတဲ့ပမာဏဟာ ဘယ်လောက်ဆိုပုံမှန်လို့ သတ်မှတ်နိုင်သလဲ။